Ibhinqa abaqhubi umfanekiso kuba Italy - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ngoko ke njengoko hayi kuba interrupted yi-nasiphelo carbohydrate vineyards (kwaye eziyi-ka-utyelelo kwi phakathi), nanku isikhokelo kuba girls ukudada kuwo Italy. Zininzi izizathu ukuya Italy, ezifana incasa ka-umkhenkce cream. Abanye abantu yiya ukufumana incasa ezimbalini, ngeli lixa abanye bathabatha nesabelo umphandle imisebenzi. Ukususela architecture, ukutya, iwayini, ubomi - zonke Prussia kuphuma kwi street. Siyazi njani ukuba badle, indlela dress, kwaye njani ukuze wonwabe. Abafazi nokuya kwi pilgrimage kwi-Italy, ukuya kwindawo enye okanye enye, ukubona Italy kwaye athabathe inxalenye kwi-Italian pleasures, eziya njengokulandelayo: isi-Italian abantu kuza ngqo kwi-incopho: isi-Italian abantu bamele elimnandi. I-mde, mnyama, kwaye beautiful proposal waba mhlawumbi minted kwi-Italy. Ndicinga ukuba uninzi heterosexual abafazi fumana isi-Italian abantu banobuhlobo. Ngoko ke, ukuba ukhe ubene ikhangela abantu, kufuneka yiya Italy. Amadoda nazi kakhulu polite kwaye ukuwa ngothando kunye nabo ngokulula ngakumbi, esingekhoyo ngoko ke embi. Sculptures Ukuba Prussia akunjalo, kuba wena, ngoko ke mhlawumbi kufuneka nabo ngokugqibeleleyo modeled. Idla baya kuba sika-ngaphandle cinezela, musa ukusebenzisa engalunganga pickup imigca, kwaye wear kakhulu abancinane impahla, ukuba ngalo lonke.
Michelangelo ke Udavide, enye uninzi famous sculptures kwi-Italy.
Ukuba ubandwendwelayo Florence, jonga opposite posename kwaye sibone indlela esisebenza ngayo wonderfully xa ibonisa yayo nani. Ukuba ufuna musa ufuna ukuba ahlawule ukubona Udavide, kukho ezimbini ngokulinganayo comment replicas kwi-town. Ukongeza Umlawuli we-Uffizi igalari, kwindawo enye ubona ukuba abaninzi sculptures kwaye imisebenzi unguye ukususela Renaissance. Carbohydrates Lento i-fact: abafazi crave carbohydrates ngaphezu abantu. Ngoko ke, kutheni na yanelisa oku craving kunye lovino, lasagna, pasta kwaye isonka. Mna Ndiza ngokuqinisekileyo Italy izakubeka yayo phakathi umnwe kwi Atkins yezosondlo ukuba oko wayenako. Prussia bakholisa ukuba adle isonka, ngalo lonke meal, kwaye nkqu ukuba ngu nzima meal, pasta kwaye lovino ingaba okumnandi. Elungileyo imozulu, uyakwazi kuba candlelit sangokuhlwa kwi-umphandle echibini. Kwaye ukuba ufuna a snack, ungasoloko get a sika ka-lovino embalwa euros. Ujulia u-roberts kwi-wefilim"Kudla, ukuthandaza"likes xa emva ezimbalwa iinyanga staying kwi-Italy, yena sele iingxaki wearing jeans kuba esivakalayo. Umkhenkce cream kwi-Italy lufana ukuba i-bangkok: ke kuyo yonke indawo, ngoko ke, ngethemba, thina ekhohlo igumbi kuba dessert emva nzima car dish. Ulwaphulo-mthetho akuthethi ukuba njenge-Italian umkhenkce cream. Kunzima ukuba ivumba inyama cones kwaye bona a libanzi umqolo we flavors kwaye hayi kuba ulingeka ukuya ngaphakathi. Kukho ke abaninzi flavors ukuba oko kusenokuba nzima ukukhetha nje omnye. Ukuba uyakwazi ukugcina isithuba, yenza isigqibo lula kwaye get ezimbalwa iibhola (Nutella, kwaye coconut chocolate ngomnye wam ezithandwa kakhulu). Kwaye ukuba uziva ngathi ke, musa kuba besoyika ukuba badle umkhenkce cream endaweni yokutya.
Ndiye ndizixelela:"Xa ndiza kwi-Italy"ukuba apologize kuba umkhenkce cream.
Nomad Mat uthi:"mna na incasa i inkcazo emfutshane, kwaye xa ufuna balibeke emva phezulu, akukho care unje lemon umkhenkce cream."Ndithanda elungileyo glass of iwayini kunye isidlo sasemini. Kukho iwayini imimandla Italy, ngoko uza ngokuqinisekileyo kuba abajikelezayo kufutshane omnye kubo. Uyakwazi ukuthatha nesabelo i-umbutho utyelelo vineyards, apho kusoloko iquka iwayini kokungcamla. Ukuthenga iwayini kwi-Italian grocery stores kanjalo ridiculously cheap, ngoko ubusuku ngaphandle kunye a glass (okanye bottle) kwewayini ingaba lula ukulawula kuba na uhlahlo-lwabiwo-mali. Architecture Kuwe awuyidingi nanye kuzo uzoba ukuncoma i-distinctive architecture ka-Italy. Eli lizwe ngu ezaziwayo kuba yayo Roman antiquity kwaye Renaissance. Kuyo yonke indawo kukho umdla structures ukuba illuminate. Admire i-Colosseum kwi-Eroma, i-Cathedral kwi-Florence, colorful izindlu kwi-Burano okanye omnye Italy ke incredible i_zikwere (Plazas). Kunye yayo millennial imbali, Italy inikeza ezininzi exciting izinto bona.
Carnival mna uthando costume amaqela, xa oko iza Venice, ndizama ukuba uqinisekile ukuba Carnival izakuba eyona nto ekhangele phambili.
I-era ka-costumes kwaye zemaleko sele ukwenza mysterious kwinto kule fascinating isixeko. I-carnival iqala malunga kwiiveki ezimbini phambi Ash ngolwesithathu kwaye kuyaphela ngolwesibini (umhla phambi Ash ngolwesithathu). Njengoko ixesha elide kangangoko kunokwenzeka kuba enkulu indimbane, a carnival outfit ingaba phawula le-Italian route. Purchases: Lo ndinguye injongo disguise kwi-Florence, ulwaleko izihlangu kwaye handbags, ihamba kunye a ethembisa fashion icandelo lomboniso, unako ukuzalisekisa neminqweno na Shopaholic. Kukho abalobi boutiques kunye eyodwa iimveliso, ngokunjalo ezininzi street vendors. Gucci, Prada kwaye eliwaka ezinye designers ekhaya kwi-Italy. Apha uza kufumana yonke into ofuna. Yenza igumbi yakho bag kuba bonke abo intle izinto eziza impress abahlobo bakho xa ufumana ekhaya. Italy ngu encinane incasa ka-Paradesi kuba abafazi travelers. Xa mna uthando unguye kwaye architecture kwi-Italy, kukho kanjalo sexy abantu, cozy ukutya kwaye drinks, kwaye ngumngeni iziganeko ukuba dibanisa umbala izizathu kutheni wonke umfazi simele siphathe herself ukuba uhambo ukuba Italy. Laura Walker isebenzisa i-Errante sole kwiwebhusayithi. Yena ngoku ubomi kwi-Portland, apho yena sele zichaziwe Masha, izinto ezongezelelwayo kwaye indlu brands ukusuka Empuma Afrika manufacturers. Ukongezelela, kuye shop, Laura imisebenzi njengokuba besebenza ibhasi kuba ngokutsha bafika refugees yayo town. Yena imisebenzi kunye abaxhasi ukusuka zonke phezu kwehlabathi kwaye isebenzisa yakhe limited ulwazi Swahili ukukhonza yakhe Congolese abaxhasi. Kanjalo usebenza abaxhasi kwi-kumbindi Mpuma, e-Asia, amanye amazwe e-Afrika, Central Emelika kwaye Ecuba. Olugqityiweyo loomama isikhokelo ukusuka ku-A ukuya ku-Z kuba abantu iyafumaneka fumana ngayo Kristin ke, incwadi entsha, Conquering zeentaba.
Iwayini imimandla ka-Italy ichumile vineyards
Ukongeza ezininzi isebenziseke tips for kwaye ilungiselela ucwangciso trips, incwadi kanjalo lijongana anxieties, ukhuseleko, kwaye yeemvakalelo zakho fears ukuba abafazi amava xa abajikelezayo yedwa. Iqulathe ngaphezu amabini interviews nabanye abafazi okanye writers kwaye travelers. Cofa apha kwi lfunda kakhulu malunga ne-incwadi njani oko unako ukunceda wena, kwaye unako ukuqalisa ukufunda namhlanje. Zam endizithandayo ndawo ukuhamba-hamba jikelele yentengiso kwi-Florence. Nawuphi na umntu ange impressed kum. Nanini na xa ndaba engalunganga mini, ndiza kuhamba ezingqonge ummandla wentengiso kwaye uhambe ngendlela kakhulu ngcono isimo. Amadoda, carbs kwaye inqwelo. Ndinqwenela ukuba ucinga ukuba kuphela abafazi travelers kuba lokuphuma ezi stereotypes. Ndiza ngokuqinisekileyo, hayi abantu, carbohydrates kwaye inqwelo simemo kwakhona, kwaye ndicinga ukuba ibizakuba ulwaphulo-mthetho kuba Italy ukuba lahla zonke isithathu usidibanise, iwayini, architecture kwaye carnival uncedo counterbalance eli-ubudala stereotypes. Oko ikhangeleka ngathi nisolko ixakeke kakhulu uyazi kakhulu malunga engalunganga izinto. Ndiyaqonda umkhenkce cream ngu amkele impiliso kuba yonke into. Christopher, ndiza uxolo kuwe wayenolwazi engalunganga amava kwi-Italy. Yena ubomi kwi-Italy, ngamanye amaxesha kunzima nzima kwaye kunzima, kodwa kukho abaninzi kangaka dibanisa izinto (gelato) ukuba ngxi umenze ezikhethekileyo ndawo. Mna watya yanye (okanye isibini okanye isithathu) slices ka-lovino kakhulu kakhulu ngexesha ndandikho apho, kodwa ke nzima ukuya nge pizzerias kwaye hayi thatha sika. Michelle, musa xana ukuya NAPLES kuba lovino. Ngamanye amaxesha ungafumana decent lovino kwi enye inxenye Italy, kodwa Bella Napoli yindawo apho kwaba invented.
Comment kwaye comment.
Olukhulu i-imeyili. Ndiyathemba ukufumana Italy ukubhala omnye umyalezo. Kulo nyaka uphelileyo ndandikunyaka milancity in italy kuba fashion Ngeveki, kodwa akubanga ntoni mna kulindeleke ukuba ukususela Italy. Xa umlingane wam kwaye mna babebaninzi Italy kwiminyaka embalwa edlulileyo, siye yintoni i-avokhado, umkhenkce cream yonke imihla, kwaye ngamanye amaxesha aliqela mini. Dibanisa, eyona lovino mna anayithathela ngonaphakade tasted waba kwi-Naples. Owu, indlela ndinqwenela ayikwazi umva Italy nge Bang.
Ngoko ke Ndinguye ninoyolo ukuba ndaya Naples.
Lo nto ukuba rhoqo overlooked xa makhaya Italy. Absolutely omnye zam endizithandayo izixeko ehlabathini. Oku mnandi ngeposi, kwaye ndiza ngakumbi ethambileyo kunye ukutya kwaye architectural isiqingatha.
Mna uyakwazi ukuchitha imihla yam ngokulula ehamba ezitratweni ka-Italian izixeko kwaye amehlo abo ukutya.
Ethabatha lovino, umkhenkce cream kwaye kunjalo toast Haha, ndiya kuvuma, xa isi-Italian babantu abakho wam nto, architecture, ukutya newayini ingaba kuba umbimbi. Mna admit ukuba ndawela ngothando kunye i-Italian. Ngethamsanqa, wawa kakhulu kakhulu ngothando kunye nam. Ndingathanda kuba sithande, expressive, beautiful umyeni i-kwesizathu ukundwendwela usapho lwam kwi-Roma kwaye Naples. Ewe, ndiya kuvuma ukuba Italy yindawo apho abafazi yezobalo. Mna liked ukuba kubhadula jikelele kwamanye amazwe kwaye kuthenga pashminas. Naphina apho ndahamba, mna ke nje anomdla unguye kwaye architecture.
Ndaba kakhulu phenomenal mushroom risotto kwi-peoriacity in italy kwaye uninzi okumnandi umkhenkce cream kwi-Roma kwaye Florence.
Mna andinaku linda ukufumana umva. Ndiya kuvuma, kukho into uthando kwi-Italy. Endleleni malunga zinokuphathwa abantu ngalo Cinque Terre Randy wathabatha a ibhafu kunye sat kwi kolwalwa elandelayo kuthi kwi-i-Italian ubuhle swimsuit, uzalise kunye a pink bikini tracksuit kwaye axis powers iinwele.
Izakuba disgusting kwi-States, kodwa exciting kwi cliff kwi-Italy.
Ndithatha eminye imifanekiso. Ndaba ukwenza oko. Ndiza a guy, kodwa kule meko ndandisele shouting. Ndandikunyaka Eroma kuba kwiintsuku ezimbalwa, kodwa mna wachitha nesiqingatha ukuba ixesha kwi-British Embassy (enkosi yam eks kwaye bombing), ngoko ke, mna ayifumananga phantse kangangoko ixesha kuba umkhenkce cream kwaye lovino njengoko ndinqwenela liked. Kulungile, ndicinga ukuba ndiza ukulungele ukuya kwakhona, ngenxa yokuba mna anayithathela sele abahlala Italy kuba unyaka ngoku, ngoko ke, ndiyazi ngokugqibeleleyo kakuhle kwaye uyavuma ukuba ukutya kwaye umkhenkce cream kukuba eyona nto owakhe eyenzekileyo.
Kodwa asingabo bonke abantu bamele mde, mnyama, kwaye beautiful, ingakumbi xa ufuna njengoko mde njengokuba nam, kodwa nangona kunjalo emininzi ngabo encinane.
Ndicinga ukuba uninzi izimvo apha ziqulathe eyona imbi uluhlu cliches mna anayithathela ngonaphakade weva malunga Italy. Kukho iingxaki ezininzi kwi-Italy, kwaye izinto ezininzi azisebenzi, kodwa ukuba uyazi ngenene eli lizwe, kufanele wazi kunabela zonke phezu kwehlabathi. Kwaye rhoqo njengoko kuchaziwe lovino, pasta kwaye mandolin, kodwa ukuba ziyinyani ukuhamba (kwaye ukususela kufuneka abe kule hetalia), uyazi ukuba Italy ayikho nje malunga Eroma, Venice, Florence kwaye milancity in italy. Kukho enkulu ngezixhobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo landscapes, elona likhulu yenkcubeko yelifa lemveli kwihlabathi kwaye kakhulu ngakumbi. Uzakufumana gqabi groves kwaye steep iinduli, owozelayo villages kunye charming cobbled ezitratweni, lush vineyards, medieval castles, yamandulo amabandla kwaye zonke ukuba unguye kwaye imbali kufuneka yenziwe kwixesha elidlulileyo. Ngoko ke nceda musa ukubhala banal izimvo malunga into ukuba awuyazi kakuhle kakhulu.
Ndicebisa ezimbalwa amakhonkco ukuba uza kukunceda ufumane ukwazi Italy kancinci ngcono kwaye (mhlawumbi) appreciate kuyo.
italia.e bazive omkhulu ekhaya. Ndingathanda ndwendwela Italy baze baphile ngendlela enye yezi villages. Mna anayithathela zange uhleli ngaphandle THINA, kodwa intliziyo yam ingaba usoloko uhleli phambi kwexesha kakhulu kwaye akunyanzelekanga ukuba baqonde kutheni.
Naziphi na iingcebiso izakuba eluncedo ngenxa yam yokuqala uhambo.
Ndiyacinga ukuba akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuya ekhaya simemo kwakhona, mna anayithathela fallen ngothando kunye naye.
Italy kubaluleke ngokwenene breathtaking, i-sights, tastes, angaqhelekanga, adventures ukuba ndawela ngothando kunye kweli lizwe, kwaye mna andinaku linda abuye.
Mna ke kwi-Italy kwi-meyi, ndithanda yonke into malunga Italy. Mna ingakumbi liked Florence. Ndifuna ukuba kuza emva kunyaka olandelayo ku may. Andisoze kuba ukubona ukuba ndinako yenze ezingama-lwabiwo-mali kweli xesha. Oh, umkhenkce cream enkulu. Ixesha elizayo, cinga makhaya abanye abalobi ezinemigodi njenge Treviso, umzekelo, Venetian igadi, ebizwa ngokuba Igadi ka-Venice, absolutely charming, i-birthplace ka-Prosecco kwaye inqwelo. Goodbye, wonke umntu. Ngenxa ubudala lo myalezo kwaye ubunzima ka-moderation ezininzi spam imiyalezo, izimvo baba ingasebenzi.
Free iifoto ka-flirting ngaphandle ubhaliso kunye phones
Винсент Сент Оның кездесу. Сан-Томе
esisicwangciso-mibuzo roulette kwi-intanethi ngaphandle get ukwazi ividiyo Dating nge kubekho inkqubela kuba free Chatroulette Dating inkonzo ividiyo ukuncokola nge-girls simahla kwaye ubhaliso lonely ufuna ukuya kuhlangana nawe Dating for a ezinzima budlelwane free Dating budlelwane ividiyo Dating akukho ubhaliso Dating ngaphandle ubhaliso kuba free